यसपटक बुटवलका मतदाताको मन बदलिन सक्छ - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
जोगी जीवनशैली अपनाएका मेयर उम्मेदवारको बुटवललाई देशकै आर्थिक केन्द्र र ब्यावसायमैत्री शहर बनाउने सपना
समयको खेल पनि कस्तो ! आफ्नै बासको ठेगान छैन,जोसंग चुनाव लड्ने खर्च पनि छैन । सुकुम्वासी जीवनशैली, यायावर दिनचर्या । तर पनि उनी मेयरको उम्मेदवार छन् । हो,यीनी हुन्,खेलराज पाण्डे ।
चुनाव लड्न धनी हुनुपर्छ मान्यता एकातिर । बाहुबली शैलीको आवश्यकता अर्कोतिर । तर पाण्डेसँग यी दुवै कुरा छैन । तर हेर्नुहोस, नेपाली कांग्रेसले यसपटक लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक केन्द्र बुटवल उप–महानगरपालिकाका लागि मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ, उनलाई ।
निष्कलंक, कर्मशील, गतिशिल र इमानदार । यस्तो लाग्छ,यी शब्दहरु पाण्डेकै लागि बनेका हुन् ।
अहिले पाँच बर्षअघिको कथा फेरि दोहरिएको छ । यसअघि २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनको क्रममा यसै उप–महानगरपालिकाको मेयर पदमा कांग्रेसका तर्फबाट पाण्डे नै उम्मेदवार थिए । तर, चुनावी अंकगणितले उनलाई थोरै साथ दिएन ।
यसअघिको निर्वाचनमा म पराजित भएको कारणले पनि यसपटक यहाँका मतदाताले मप्रति भरोसा देखाउनु भएको छ, उहाँहरुले मलाई मेयरको पदमा बसेर काम गरेको देख्न चाहनुभएको छ ।
नेकपा एमालेका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका शिवराज सुवेदी २३ हजार २ सय ४९ मत ल्याएर बुटवलको मेयरमा निर्वाचित भए । पाण्डेले २० हजार ८ सय ५१ मत प्राप्त गरे । एमालेले २०६४ देखि जित्दै आएको बुटवल उप–महानगरपालिकाको नेतृत्वमा त्यसबेला पाण्डेले दह्रो चुनौती दिएकै हुन् ।
तर, यो पाँच बर्षमा तिनाउ नदीमा धेरै पानी बगिसक्यो । बुटवल उप–महानगरपालिको मेयरका रुपमा सुवेदीको कामलाई बुटवलबासीले नजिकबाट नियालिसकेका छन् । मेरोलाइफस्टाइलसँगको कुराकानीमा निकै आत्मविश्वासी देखिएका ५२ बर्षिय पाण्डेले भने, ‘यसअघिको निर्वाचनमा म पराजित भएको कारणले पनि यसपटक यहाँका मतदाताले मप्रति भरोसा देखाउनु भएको छ, उहाँहरुले मलाई मेयरको पदमा बसेर काम गरेको देख्न चाहनुभएको छ ।’
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहेको अवस्थामा पाण्डेले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट बुटवल उप–महानगरपालिकाको राजनीतिक संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । यसैले पनि स्थानीय निकायबाट हुने काम कारवाहीलाई पाण्डेले बुझेका छन् ।
मैले प्राप्त गरेको २१ हजार मतले आगामी ५ वर्ष अझ बढी सक्रिय भएर जनताको काममा लाग्न उत्साहित बनाएको छ । चुनावमा म उपविजेता भए, तर मलाई सुस्ताउने र घर बस्ने होइन अझै सकृय भएर काममा जुट्ने प्रेरणा प्राप्त भएको छ ।
पछिल्लो निर्वाचनमा पराजित भएपछिको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बोलेका कुरा निकै सारगर्वित र राजनीतिक संस्कारयुक्त थिए । उनले त्यसबेला भनेका थिए, ‘मैले प्राप्त गरेको २१ हजार मतले आगामी ५ वर्ष अझ बढी सक्रिय भएर जनताको काममा लाग्न उत्साहित बनाएको छ ।’
उनले अगाडी भनेका थिए, ‘चुनावमा म उपविजेता भए, तर मलाई सुस्ताउने र घर बस्ने होइन अझै सकृय भएर काममा जुट्ने प्रेरणा प्राप्त भएको छ ।’
कांग्रेसका नगर सभापति रहेका पाण्डे यसपटक सत्तारुढ गठबन्धनबाट उम्मेद्ववार हुन् । तीनपटक बुटवलको नगर सभापतिको जिम्मेवारी पाइसकेका पाण्डेको एकल नाम मेयरका लागि सिफारिस भएको थियो ।
ठूलो अन्तरले चुनाव जितेका ठाउँमा परिणामहरु उल्टिएका पनि छन् । यस्तो स्थितीमा बुटवलमा यसपटक के होला ? धेरैलाई कौतुहल छ । के यसपटक बुटवलका मतदाताको मन बदलिन सक्छ ? यसका लागि चुनावी नतिजा नै पर्खिनुपर्ने हुन्छ । गत निर्वाचनभन्दा बुटवलमा २४ हजार मतदाता थपिएका छन् । बुटवलको आगामी भविष्य यहाँका ९० हजार मतदाताको विवेकमा भर पर्दैछ । समय बलवान छ, बुटवल उप–महानगरपालिकाको नेतृत्वको निर्णय वैशाख ३० पछि हुने नै छ ।
मतदाताले मलाई ‘एकचोटी अवसर दिनुपर्छ’ भन्ने भाव राखेको पाएको छु ।
तर, पाण्डे आफ्नो विजयप्रति अहिलेदेखि नै आश्वस्त छन् । मेरोलाइफस्टाइलसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘मतदाताले मलाई ‘एकचोटी अवसर दिनुपर्छ’ भन्ने भाव राखेको पाएको छु ।’ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।
‘बुटवल आर्थिक केन्द्र र व्यावसायीमैत्री शहर हुनेछ’
बुटवल उप–महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि दोहर्याएर उम्मेदवार बन्ने अवसर पाउनुभयो । तपाईको उम्मेदवारीको औचित्य के हो ?
मैले राजनीतिलाई निरन्तरता दिँदै आएको छु । बुटवलका स्थानीय जनताको सुख दुःखमा सधैं साथ छु । राजनीति र समाजसँग जोडिएर काम गर्दै आएको छु । बुटवलको विकास कार्यमा पनि म कुनै न कुनै रुपमा सक्रिय रहँदै आएको छु । यसैले पनि पार्टीले मलाई दोहर्याएर मेयर पदका लागि टिकट दिएको हो भन्ने लाग्छ ।
कांग्रेसबाट मेयर पदका लागि टिकट त पाउनु भयो । तर, बुटवलका मतदाताले तपाईलाई नै किन मत दिने ?
मैले बुटवलका प्रत्येक समस्यालाई नजिकबाट देखेको छु, बुझेको छु । समस्याको पहिचानमात्र होइन, मसँग समाधानका उपायहरु पनि छन् । पछिल्लो निर्वाचनमा म उपविजेता भए पनि बुटवलको विकासदेखि सामाजिक काममा सधैं सक्रिय रहेको यहाँका मतदाताले देखेका छन् । आफ्नो सबै समय जनताको सम्पर्कमा रहेर बिताएको छु । यसैले पनि मतदाताले मलाई ‘एकचोटी अवसर दिनुपर्छ’ भन्ने भाव राखेको पाएको छु ।
अर्को कुरा, यहाँका मतदाता आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत छन् । उनीहरूले योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा मेयरको रुपमा मलाई छान्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
चुनावी अभियानमा लागि सक्नुभएको छ, मतदाताबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
अहिले हामी घरदैलो कार्यक्रममा छौं । मतदाताको घर–घरमा पुग्दा मैले निकै हौसला पाएको छु । हाम्रो पार्टीलाई मत दिने कुरामा उहाँहरु सकारात्मक देखिएको मैले महसुस गरेको छु ।
तपाईसँग यसपटक बुटवलको मेयर पदको चुनाव जित्ने आधार के–के छन् ?
बुटवल उप–महानगरको विकासका लागि हामीसँग स्पष्ट कार्ययोजना छ । नयाँ सोच र चिन्तनका साथ मैले बुटवलको विकासलाई अगाडि बढाउने संकल्प नै लिएको छु । यहाँ सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको ठूलो समस्या छ । यसको समाधानका लागि पनि विभिन्न विकल्पहरुबारे मैले सोचेको छु । हरेक निर्णयमा सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई समेटेर अगाडि बढाउँछु ।
बुटवल उप–महानगरपालिको अब जित्ने मेयरको प्राथमिकता के–के हुनुपर्छ ?
बुटवललाई देशकै सबल आर्थिक केन्द्र र व्यावसायमैत्री शहर बनाउने हो । सुकुम्बासी समस्याको समाधान पहिलो प्राथमिकता हो । ज्योतिनगर पहिरो नियन्त्रणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू खोज्नै पर्नेछ । तिनाउ कोरिडोर निर्माण तथा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना पनि प्राथमिकतामा पर्छन् । यहाँको फोहरमैलाको व्यवस्थापन पनि प्राथमिकतामा पर्छ ।
बुटवलका प्रमुख समस्या के हुन् जसको निराकरण चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ ?
राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको सडकले नयाँ समस्या खडा गरेको छ । जतिसक्दो चाँडो यो बाटोको टुङ्गो लगाएर समस्या समाधान गर्ने पक्षमा छौं । कर दर अचाक्ली भयो भन्ने गुनासाहरु छन्, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।
कांग्रेसभित्र अन्तर्घातको रोग पुरानै हो । अहिले पनि तपाईलाई टिकट दिइएकोमा तपाईकै पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ । पार्टीको क्षेत्रीय सभापतिले राजीनामै दिनुभयो । असन्तुष्टिलाई सम्बोधन हुन नसके चुनावी नतिजामा प्रभाव पर्ला कि ?
टिकटको इच्छा धेरैलाई हुन्छ तर टिकट थोरै हुन्छ । टिकट नपाउनुले असन्तुष्टि प्रकट गर्नु स्वभाविक हो । यो चलिआएकै कुरा हो । असन्तुष्ट साथीहरु पार्टीप्रति बफादार हुनुहुन्छ । मेरो सिफारिस नगर समितिले गरेको हो । त्यसलाई क्षेत्रीय समितिले पनि अनुमोदन गर्यो । जिल्ला समितिले पनि सदर गरेपछि मैले टिकट पाएको हो । यसैले पनि साथीहरुले पार्टीको प्रतिष्ठालाई माथि राख्नेगरि निर्वाचनमा सक्रियता देखाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ ।
चुनाव जित्नुभयो भने सबैभन्दा पहिलो निर्णय के गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले एउटा पार्क निर्माण गरेर बीपी र पुष्पलाल, पूर्व मेयर स्व. सूर्यप्रसाद प्रधानको सालिक राखेर सबैको साझा चौतारी बनाउने छु ।
चुनाव धेरै महंगो भयो । भड्किलो भयो ? कसरी जित्नुहोला ?
म विगत तीन दशकदेखि भाडाको घरमा बस्दै आएको छु । मसँग सम्पत्तिको नाममा केही पनि छैन । शुभचिन्तक र साथीहरुको सहयोगमा मैले चुनाव लड्ने हो । पैसा खर्च गरेर अनावश्यक तडक–भडक देखाएर चुनाव लड्ने पक्षमा म हिजो पनि थिइनँ,आज पनि छैन ।
‘जनतामा भिजेको सरल तर सक्रिय ब्यक्तित्व’
२०२६ मा स्याङ्जामा जन्मिएका पाण्डे अहिले बुटवलस्थित सुक्खानगरमा बस्छन् । विद्यालय जीवनमै स्याङ्जाबाट राजनीति प्रारम्भ गरेका पाण्डेले काठमाडाैँमा पढ्दा र त्यसपछि बुटवल आएपछि आफ्नो राजनीतिक सक्रियता झनै बढाउन थाले । नेपाली कांग्रेस रोजेर राजनीतिक अभ्यास शुरु गरेका पाण्डेले निरन्तर सोही पार्टीभित्र रहेर राजनीती जारी राखे ।
आदर्श मावि, स्याङ्जामा पढ्दै गर्दा २०३९ मा नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्यता लिएर राजनीतिक जीवन शुरु गरेका पाण्डेले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । ०६७ मा कांग्रेसको बुटवल नगर सभापति भएदेखि अहिलेसम्म पनि उनी सोही पदमा छन् । यो उनको तेस्रो कार्यकाल हो ।
श्रीमती र छोराकासाथ बुटवलमा बस्दै आएका पाण्डेले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका छन् । राजनीति र सामाजिक कार्यमा आफूलाई सक्रिय राख्दै आएका कांग्रेसका पूर्णकालीन कार्यकर्ता पाण्डे ‘लो–प्रोफाइल’ मा बस्न रुचाउने तर पार्टी र सामाजिक काममा खुबै खटिने व्यक्तिका रुपमा बुटवलमा परिचित छन् ।
बीपी कोइरालाका पुस्तक पढेर र अग्रजहरुबाट उनका बारेमा सुनेपछि प्रभावित भएकै कारण कांग्रेसमा निरन्तर लागि परेका पाण्डेले झण्डै चार दशक लामो आफ्नो राजनीतिक यात्रामा सरल स्वभाव, सामान्य परिवार तर प्रस्ट वक्ताको छवि निर्माण गरेका छन् ।
सबै पार्टीसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पाण्डेलाई बुटवलमा उच्च राजनीतिक संस्कारयुक्त व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छ ।
[…] यो पनि…यसपटक बुटवलका मतदाताको मन बदलिन सक्छ […]
दलहरुले बदल्न सक्छन बुटवल ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] बुटवलमा चुनावी सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक […]
‘भर्जिन ल्याण्ड’ तिलोत्तमा बन्न सक्छ देशकै नमूना शहर - Mero LifeStyle Mero LifeStyle